Izinsiza Nezinhlelo Zokusebenza Ezingigcina Ngisomabhizinisi | Martech Zone
Izinsiza Nezinhlelo Zokusebenza Ezingigcina NgiseBhizinisini
Lwesine, Disemba 24, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izinyanga eziyisithupha ezidlule beziyinselelo njengoba sengiqale ibhizinisi lami. Inselelo enkulu ukugeleza kwemali… usheshe uthole ukuthi noma usebenza kanzima, imali ayihambi emnyango. Ngenxa yalokhu, ngiya ngincika futhi ngizimisele. Angikaze ngithenge ngisho indawo yamahhovisi njengamanje.
Bengicabanga ukuthi ngizokwabelana ngokuwohloka kwamathuluzi ami wezohwebo. Anginanto ekhethekile futhi ngisebenza ngempela ukugcina izindleko ziphansi ngangokunokwenzeka.
IMacBookPro - Anginakho okwakamuva, kepha nakanjani lena injini yami yokusebenza. Ngifisa sengathi ngabe ngibe nemodeli entsha, kepha ngibeka izindleko isikhashana. IMac yami igijimisa ingwe ngokukhazimulayo kodwa ixhume isiqaphi esikhulu sesibili bese ifika kuma okwesikhashana. Lokhu kuzoba yizindleko zami ezinkulu ngo-2010 njengoba ngibheke ukukhuphula izinga.
Intambo eyengeziwe yeMacBookPro yami - yonke ilaptop kufanele ize nezintambo okungenani ezi-2… eyodwa ozoyishiya emsebenzini neyokugcina esikhwameni sakho! Isikhathi!
I-Western Digital 250Gb USB Drayivu - lesi yisitoreji sami esiyinhloko sedatha yeklayenti, engibuye ngiyilondoloze ku-inthanethi. Ngingathanda futhi ukuthola i- Isikhathi Capsule yehhovisi lasekhaya.
IBlackberry 8330 - sibonga u Adam ngokuncoma le foni. Ingxenye yobuchopho bami ikule foni. Ivumelaniswe ne Izinhlelo zokusebenza ze-Google, unekhamera, i-Evernote, i-Twitter, i-Facebook ngisho ne-Foursquare manje kuyo.
Flip Mino HD - ukuthola amavidyo kliphu kuyinselelo kumfana obhala kakhulu, kepha lena ikhamera ye-HD yokugcina yomsebenzi! Kuhlanganiswe ne- iMovie futhi ICamtasia ye-Mac - Ukwenza ama-movie bekungeke kube lula.
Imakrofoni eluhlaza okwesibhakabhaka - Ngirekhode izethulo ezimbalwa nokuqoshwa komsindo ngale mic futhi kumnandi. Kungcono kakhulu kunombhobho we-laptop ozenzakalelayo!
I-Sony Earbuds - Kuhlanganiswe ne- I-Pandora iwijethi yedeskithophu (insizakalo ekhokhelwayo), umane nje ungahambi kahle ngalezi. Bakhansela konke.
U-Ogio isikhwama seposi kusuka kuma-eBag. Lesi sikhwama (imodeli yeHip Hop) siyesabeka… izinyanga eziyisithupha zokuhudulwa, ukujikijelwa, nokushaywa kabi futhi kusabukeka kusha sha. Ngifisa sengathi imichilo yamahlombe ibinama-swivels, noma kunjalo.
iPod Touch - Ngisazodlala nazo zonke izinhlelo zokusebenza, bafana. Ngingahle ngiyinikeze le nto izingane bese ngithola imodeli entsha, kepha… Bill ungitshela ukuthi amasha anemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi!
Ama-Freshbooks - Wonke ama-invoices weklayenti lami enzeka nge-Freshbooks. Manje senginabanye abangane abayi-2 abayisebenzisayo… kuyisoftware engakholakali njengesixazululo sesevisi sokuphatha amaklayenti akho.
eyinqolobane - Kuze kube manje, lokhu kube uhlelo oluhle kakhulu lwe-inthanethi nokuphathwa kwefayela engikusebenzise. Ihlanganiswe ngqo ne-OSX neWindows ngokuhudula bese uphonsa ubulula. Nginethoni labangani abayisebenzisayo futhi sidlulisa amafayela amaklayenti amakhulu emuva naphambili kalula.
I-Google Apps yeMeyili - Zonke ezinye izinhlelo zokusebenza zincela kakhulu uma ziqhathaniswa ne-Office (sorry Google), kepha i-Google Apps ibiza u- $ 50 / yr pricetag nge-imeyili yebhizinisi kuphela. Ikhono lami lokuvumelanisa nokuphatha izinhlelo eziningi ze-imeyili nezekhalenda lihle kakhulu.
My Isicelo # 1 sika-2009 ngaphandle kokungabaza, Ihlathi. Bengisanda kuhlangana nomuntu ngelinye ilanga obekhuluma ngokuthi bangaki ocingweni nase-imeyili bezama ukuhlela ama-aphoyintimenti. I-Tungle yenza kube lula ngendlela emangalisayo. Ivumelanisa ngokuzikhandla namakhalenda weGoogle futhi - ngakho-ke noma kunini lapho nginephutha lokuhlela - imvamisa ukuthi angizange ngilirekhode kahle.
Tags: ukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindabaisikalishareshare izinkinobhookuqukethwe okwabelwanayo
Ukusebenzisana Kwekhodi Yesikhathi Sangempela Neqembu
Isoftware Namathuluzi Angikwazanga Ukuphila Ngaphandle
Jan 20, 2014 ku-3: 13 AM